‘सुँघेरै’ जिउँदो मानिसको मर्ने दिन थाहा पाउने यी महिला !
मुख्य पृष्ठरोचक रमाइलो‘सुँघेरै’ जिउँदो मानिसको मर्ने दिन थाहा पाउने यी महिला !
सामान्यतः चिकित्सा विज्ञानमा ठूल्ठूला परिवर्तन र विकास भइसक्दा पनि जिउँदो मानिसको मर्ने दिन कसैले तोक्न सकेका छैन । तर, एक महिला मनोवैज्ञानिकले सुँघेरै कसको मृत्य हुँदैछ भन्नेबारे थाहा पाउने दाबी गरेकी छन् ।
त्यत्ति मात्रै हैन, यी महिलाले त आफ्नो यस्तो क्षमतालाई ‘व्यर्थ’ समेत भनेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘म मानिसको मर्ने दिन थाहा पाउँछु । तर, उनीहरूलाई बचाउन सक्दिनँ । मेरो यो क्षमता बेकार छ ।’
यस्तो पत्याउनै नसकिने दाबी गर्ने महिला अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्सकी हुन् । २४ वर्षीया उनको नाम अरी काला हो । उनी पेसाले मनोवैज्ञानिक हुन् ।
उनले यो काम थाल्नुअघि आफ्नो ९–५ को जागिर गत वर्ष मात्रै छाडेकी थिइन् । एकैखालको काम गर्दा मानसिक रूपमा हैरान भएको भन्दै उनले जागिर छाडेकी थिइन् ।
खबरअनुसार अरीलाई आफ्नो ‘छेटौं इन्द्रिय’ बारे त्यत्तिबेला पत्ता लाग्यो, जतिबेला उनी मात्रै १२ वर्षकी थिइन् । जब उनी एकदिन आफ्ना बिरामी काका भेट्न गइन्, त्यसबेला उनले अद्भुत गन्ध थाहा पाइन् ।
त्यसपछि उनले त्यस्तै गन्ध अन्य व्यक्तिबाट पनि पाइन्, जुन अरूले थाहा पाइएनन् । नभन्दै अरीले अन्य जो–जो व्यक्तिबाट त्यस्तो गन्ध पाएकी थिइन्, उनीहरू अरीले भनेकै मितिमा मृत्यु भएको थियो ।
अरी आफ्नो यस्तो क्षमता भएकोमा खुसी छैनन् । बरु, आफूसँग यस्तो ‘छेटौं इन्द्रिय’ हुँदाहुँदै पनि मृत्यु हुन लागेका व्यक्तिलाई बचाउन नसकेकोमा पनि दुःखी छन् ।
उनले भनेकी छन्– ‘मलाई थाहा छैन, मैले यो आफ्नो शक्तिलाई के गरुँ । को मर्दैछ भनेर म सजिलै थाहा पाउँछु । तर, म उसलाई यसबारे केही भन्न सक्दिनँ । कोही जिउँदो मानिसको मृत्युको मिति उसलाई भन्न मलाई डर लाग्छ । म अरूको भावनासँग खेल्न चाहदिनँ ।’